ဒါကလျှင်ဒါက | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်အလုပ်တစ်ခုကိုမဆိုသတ်မှတ်နိုင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုစဉ်းစားပါ။ တစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါ (ဒီ) ထို့နောက်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ (ကြောင်း)။ အဆိုပါ ဤ လုပ်ငန်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းသည်အစပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောဥပမာအစပျိုးသည် ငါဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်ကဓာတ်ပုံတစ်ခုမှာ tag လုပ်ခဲ့ရင် or ငါ Twitter ပေါ်မှာ tweet လျှင်။ အဆိုပါ ထို လုပ်ငန်းတာဝန်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုက လှုပ်ရှားမှု။ ဥပမာအချို့သည် Actions ဖြစ်သည် ပြီးတော့ငါ့ကိုစာတစ်စောင်ပို့ပါ or ထို့နောက် Facebook ပေါ်တွင် status message ကိုဖန်တီးပါ.
ဒါကနောက်ကွယ်ကစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ် ဒါကထိုအခါဤသည် အကယ်.တစ် ဦး အလတ်စားတစ်တန်မှတဆင့်အလုပ်များကိုအလိုအလျောက်ရန်တစ် ဦး သိသိသာသာရိုးရှင်းတဲ့စနစ် လိုင်းများ။ အေးမြတဲ့အရာတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးတဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုစာရွက်အဖြစ်မျှဝေနိုင်သည်။ဥပမာ)!
If This If ထိုအခါ၎င်းသည်လျှောက်လွှာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Application Programming Interfaces နှင့်ပေါင်းစပ်သော်လည်းပရိုဂရမ်အတွေ့အကြုံမရှိပါ။ ဒါတွေစျေးကွက်ထဲရောက်တာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ အကြောင်းအရာအလိုအလျောက်အာရုံစိုက်သည့်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည် စောင်ပိုက်!
CSS3 ထောင့်များ၊ Gradients၊ Shadows နှင့်အခြားအရာများ…
ထိရောက်သောအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများဖန်တီးရန်အဆင့် ၁၀ ဆင့်